Amaala Antigua na Barbuda Ndị Ọchịchị
A ga-ahụ na ntinye akwụkwọ nke ezinụlọ gụnyere ndị otu ezinaụlọ ndị a;
Nwaanyị nke onye na-achọ akwụkwọ maka ya
Nwatakịrị nke onye na-achọ akwụkwọ ma ọ bụ nwunye ya na-erubeghị afọ 18
Nwatakịrị nke onye kachasi akwụkwọ ma ọ bụ nke onye ọlụlụ ya ma ọ dịkarịa ala 18 afọ na-erughi afọ 28 na onye na-aga ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka amaara nke ọma na onye na-ahụ maka akwụkwọ na-akwado ya.
Nwatakịrị nke onye na-achọ akwụkwọ ma ọ bụ nke onye na-achọ akwụkwọ nke ukwuu bụ onye dịkarịa ala afọ 18, onye nwere nsogbu ma ọ bụ uche, yana onye ahụ na-ebi akwụkwọ ma na-akwado ya kpamkpam.
Ndị nne na nna ma ọ bụ nne na nna ochie nke onye na-achọ akwụkwọ ma ọ bụ nke nwunye ya karịa afọ 58 na-ebi ma na-akwado ya kpamkpam.
Maka ebumnuche Antigua na Barbuda Citizenship site na Mmefu Ego ‘nwa’ pụtara nwa amụrụ ma ọ bụ n’ụzọ iwu kwadoro nke onye na-achọ akwụkwọ, ma ọ bụ nke onye chọrọ ya.
2021, Amaala Antigua na Barbuda Kwadoro site na Shopify